Iflethi okanye indlu ekwicomplex | + Amakhadi Abakhenkethi Besixeko saseBolzano - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex | + Amakhadi Abakhenkethi Besixeko saseBolzano
Indlu eqaqambileyo kumgangatho we-1 wendlu eneminyaka engama-600 ubudala kunye ne-masonry yamatye kunye nefestile encinci ye-bay. Ukufikelela ngezitepsi ezinomnyango owahlukileyo. Ilungele ukuphumla emva kosuku lokubona indawo!
Kummandla okufutshane wedolophu endala kunye neendawo ezininzi zezithuthi zikawonke-wonke (imoto yekhebula, ibhasi, uloliwe).
Sinikezela ngeBozenBolzanoCard yasimahla!
Iibhayisekile okanye ii-strollers zinokumiswa kwindawo yokungena. Ukungena ngaphandle koqhagamshelwano kunokwenzeka ngesicelo!
Iflethi inekamelo elikhulu lokuhlala eliqaqambileyo elinebhedi, isofa etsalwayo, isitulo esirhuqayo kwifestile engaselunxwemeni netafile yokutyela.
Inegumbi lokuhlambela elincinci elinendlu yangasese, icubicle yeshawa nesinki. Iitawuli, iphepha langasese, isepha yezandla nomatshini wokomisa iinwele ziyafumaneka.
Ekhitshini elincinci, zonke izinto zokupheka eziyimfuneko ziyafumaneka, kunye nesitovu esisebenza nge-induction.
Ioli yomnquma, iviniga, ikofu, iti ephilayo sele ilungile!
enefriji Umatshini wokuhlamba impahla - (*2.00 euros - ihagu-bank isecaleni kwawo :)
Umatshini wokomisa iimpahla xa uceliwe - (* i-4.00 euros )
Igumbi elinebhedi (1.60 x 2.00 m)
ibhedi ekwayisofa (ivuliwe 1.30 x 2.00 m)
Itafile yokutyela yabantu ababini (omnye umntu unendawo )
Siyakuvuyela ukubonelela ngebhedi yokuhamba yosana (ii-euro eziyi-5). Isityalo se-cactus sithathelw 'indawo zizinto zokudlala zamaplanga!
Izinto zokogquma iiduveyi, iibhedi, imiqamelo neetawuli ziyafumaneka.
Siyayicoca iflethi okanye indlu ekwicomplex size sihlambe ngesepha yokuhlamba impahla ukuze silondoloze indalo namanzi. Asinayo i-ayini yokuhlamba iimpahla ngenxa yezizathu zemvelo kwaye asiyisebenzisi i-softener.
Yiflethi okanye indlu ekwicomplex engatshayiyo.
Qhagamshelana nam ukuba unawo nawuphi na umbuzo :) Ndiza kukuvuyela ukukunceda ngokuceba:)
Sinevenkile yokutya okusempilweni entle, ekwikona nje, apho unokuthenga izibiliboco zasekuhlaleni. Kwibhotile yewayini elungileyo, vele uwele isitrato uye kwivenkile yewayini egcinwe kakuhle. Ikhemesti malunga neemitha ezingama-200 (ngethemba lokuba ayizukusetyenziswa).
Kukho igadi yebhiya epholileyo kwindawo ekufutshane.
Rhoqo ngoLwesibini nangooLwezihlanu kusasa kukho 'imarike yamafama kwisikwere seholo yedolophu ekufutshane, ngaphantsi kwemizuzu eli-10' ukuhamba. Umgama nje wemizuzu eli-10, ungafikelela kwimarike yeziqhamo yaseBolzano, iindawo zokuhlala, iimyuziyam, iivenkile, njl.
Thina, u-Stine kunye noJens, sihlala nabantwana bethu be-4 kwigumbi eliphezulu kwaye siyavuya ukunceda nayiphi na imibuzo malunga neetikiti zezothutho zikawonkewonke, iziganeko okanye iindawo ezintle zokumisa kunye nantoni na ehlobene neBolzano!
Ukuba unomdla, siyavuya ukukunika umbono kwisidiliya sethu esincinci esilinywa nge-biodynamically emva kwendlu yethu!
Thina, u-Stine kunye noJens, sihlala nabantwana bethu be-4 kwigumbi eliphezulu kwaye siyavuya ukunceda nayiphi na imibuzo malunga neetikiti zezothutho zikawonkewonke, iziganeko oka…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bozen